Horudhac: France vs Switzerland… (Faransiiska oo dhaawacyo la tacaalaya kahor ciyaarta caawa) – Gool FM
Horudhac: France vs Switzerland… (Faransiiska oo dhaawacyo la tacaalaya kahor ciyaarta caawa)
(Bucharest) 28 Juun 2021. Xulka qaranka France ayaa caawa kulan ka dhici doona dalka Romania isla markaasna ka tirsan wareegga 16-ka tartanka qarammada qaaradda Yurub la yeelan doona xulka Switzerland.
Xulka Faransiiska ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay guruubkii dhimashada ee F isagoo hal kulan guuleystay labo kalena barbarro helay, halka Swiss-ku uu booska saddexaad kaga soo baxay guruubka A ee tartanka Euro 2020.
Garoonka: National Arena
Garsooraha: Fernando Rapallini (Argentina)
Xulka qaranka Faransiiska ayaa la tacaalaya dhibaatooyin dhaawacyo ah, waxaana haatan shaki weyn uu ku jiraa xiddigaha dadabka bidix ka ciyaara ee Lucas Hernandez iyo Lucas Digne kuwaasoo dhaawacyo kaga baxay kulankii ugu dambeeyay guruubka, waxaa sidoo kale la dabiibayaa oo ay adag tahay inay ciyaartan qayb ka noqdaan Marcus Thuram iyo Thomas Lemar tii oo ay jirto in Ousmane Dembele uu seegi doono inta ka harsan tartanka kaddib dhaawac jilibka kasoo gaaray ciyaartii Hungary.
Dhanka kale, ma jiraan dhaawacyo laga soo sheegay xulka Switzerland taasoo la micno ah inay heystaan saf fayoobi qaba.
Tani waxay noqoneysaa ciyaartii shanaad oo ay labadan xul isku arkaan tartan weyn kaddib wareegyadii guruubyada ee Euro 2004, Koobka Adduunka 2006 & 2014, iyo Euro 2016, waxayna Faransiiska dhiggooda ka heystaan rikoor guuldarro la’aan ah maadaama laba jeer ay garaaceen Switzerland labana barbarro ay ku dhammaadeen.
Ciyaartan waa tii ugu horreysay ee ka tirsan wareegyada bug-baxa tartammada waaweyn oo ay labadan xul isku arkayaan, ciyaartii ugu dambeysayna waxay ahayd mid ka tirsan wareegga guruubyad tartanka Euro 2016 taasoo ku dhammaatay barbarro goolal la’aan ah.
Xulka Faransiiska ayaa la kulmay kaliya hal guuldarro 17-kii ciyaarood ee lasoo dhaafay tartammada Euro iyo Koobka Adduunka, waxaana uu guul gaaray 12 kulan halka afar barbarro uu galay, guuldarrada qura ee soo gaartayna waa tii fiinaalka Euro 2016 xulka Portugal koobka kaga qaaday.
Faransiiska ayaa dhinaca kale guuldarro la’aan ah labadii sano ee lasoo dhaafay kulammada tartammada rasmiga ah, waxaana guuldarro ugu dambeysay bishii June ee sanadkii 2019 kulan ka tirsanaa is reeb-reebka tartankan qarammada qaaradda Yurub oo uu la ciyaaray xulka Turkey, tan iyo markaasna xulka Les Bleus ayaa guuleystay 14 kulan halka shan kalena barbarro uu galay, sidaas darteed waxa uu doonayaa inuu barbarreeyo rikoorka guuldarro la’aanta ugu dheer ee xulkan oo ah 27 kulan isla markaasna uu sameeyay intii u dhexeysay 1994 illaa 1999, waxaana 21 ka mid ah kulammadaas ciyaaray Didier Deschamps oo ah macallinka haatan ee qaranka France.
Antoine Griezmann ayaa ciyaaray mid kasta oo ka mid ah 51-kii ciyaarood ee lasoo dhaafay xulka France laga soo bilaabo 31-kii August 2017, waxaana weeraryahanka kooxda Barcelona uu noqday xiddiga qura ee u xulalka qaaradda Yurub saftay 50 kulan ama wax ka badan tan iyo markaas.
Switzerland ayaa soo gaaray wareegyada bug-baxa mid kasta oo ka mid ah afartii tartan ee waaweyn ee lasoo ugu dambeeyay waxayna kala yihiin Koobka Adduunka 2014, Euro 2016, Koobka Adduunka 2018 iyo Euro 2020, balse waxaa uu ku haray marxaladda ugu horreysa kaddib guruubyada saddexdii jeer ee hore.
Kaddib labadii gool ee uu ka dhaliyay xulka Turke, Xherdan Shaqiri ayaa noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya ee xulka Switzerland isku darka tartammada Euro iyo Koobka Adduunka isagoo heysta toddobo gool waxaana uu dhaafay Josef Hugi oo lix gool ka dhaliyay labadaas tartan.
Dhinaca kale, Shaqiri ayaa rikoorka gooldhaliyaha ugu sarreeya xulka Swiss-ka tartanka Euro la wadaaga Hakan Yakin iyagoo min saddex gool tartankan ka dhaliyay.
Horudhac: Croatia vs Spain... (Miyuu xulka La Roja iska meyri doonaa ceebta ka heysata wareegga 16-ka tartammada waaweyn?)
Barcelona iyo Lionel Messi oo ugu dambeyn ku heshiiyay saxiix qandaraas cusub... (Immisa sano ayuu sii joogi doonaa Camp Nou?)